Liiska rukhsadaha la buunbuuniyey ee aan siinno WhatsApp | Androidsis
Francisco Ruiz | | Codsiyada Android, Amniga, Whatsapp
U fiirsashada rukhsadaha waxaad ubaahantahay cusbooneysiin rasmi ah oo rasmi ah ee barnaamijka fariimaha deg dega ah ee xariifka ah Whatsapp, Waxaan u imid inaan garto inta ogolaansho ee aad u baahan tahay oo ficil ahaan aad noo leedahay okay in la sameeyo oo laga noqdo sidaad rabto annaga oo aan xitaa ogaanin.
Aniga qudhayduba waxaan ahay qof aamin ah oo adeegsada Whatsapp waxaana filayaa inay tahay codsiga ugu fiican ee qaabka, Ma fahmin sababta qaddarkan oggolaanshahu ugu habboon yahay, oo ay ku jiraan kuwa aanan runtii fahmi karin.
Waxaa ka mid ah rukhsado ka sii daran in aan u fiirsado, waxaa jira kuwa poser samee taleefanno ogolaansho la'aan ama karti aan ku qabanno ama xitaa hel fariimaha qoraalka ah nooca SMS.
Codsigan miyuu dhab ahaantii u baahan yahay inuu awood u yeesho inuu adeegsado noocyada noocan ah xulashooyinka laga helayo meerteena? Ikhtiyaarrada sida inaad ikhtiyaar ahaan ugu soo wacdo lambarrada taleefannada adiga oo aan oggolaansho cad naga helin ama tusaale ahaan haddii aad rabto dir SMS si khaldan loogu yeedhay Adeegyada Premium in markii dambe ay nagu dhufteen biil taleefanka.
Marka laga reebo xulashooyinkan halista ah ee biilka taleefanka, waxaan sidoo kale helay kuwo kale oo aan ka yareyn xiisaha iyo halista, gaar ahaan kuwayaga asturnaanta iyo isku dhawaanshaha waxay ka dhigan tahay. Ikhtiyaarrada sida isticmaalka kamaradda xarunteena qaado sawirro iyo fiidiyowyo markii aad dareento sida ay tahay iyo had iyo jeer iyada oo aan loo baahnayn ogolaansho isticmaale ama awood samee cajalado maqal ah sidoo kale ogolaansho la'aan.
Sideen kuu sheegaa, tan ah tan rukhsadaha gudaha barnaamijyada ku saabsan Android waxay noqon lahaayeen in xoogaa laga xakameeyo Google oo kaliya ansixiya kuwa run ahaantii lagama maarmaanka u ah hawlgalka saxda ah ee codsiga su'aasha ku jira.
Iyada oo awoodaha aan siinay codsiyada sida WhatsappWaad ogtahay, marka laga reebo xogta gaarka ah ee ay naga soo ururiyaan, waxyaabaha kale ee laga yaabo inay hayaan. Duubista maqalka? Muuqaalo gaar ah iyo fiidiyowyo? Runta ayaa ah inay iyaga kaliya ogaan doonaan maxaa yeelay waxa dhabta ah waa taas rukhsadaha lagu fulinayo ficilladan haddii aan ku siinnay.
Macluumaad dheeraad ah - WhatsAppku wuxuu gaaraa 400 milyan oo isticmaale adduunka ah
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Amniga » WhatsApp waa loo oggol yahay inuu sameeyo wax kasta oo aan ogolaansho naga haysan
81 faallooyin, ka tag taada
Hello Francisco, waxaan si daacad ah u aaminsanahay inaad wax khaldan tahay. Codsiyada waxay muujinayaan rukhsadaha looga baahan yahay in lagu fuliyo falalka, sida inaad sawirro ka qaadi karto dalabka ama aad toos ula xiriiri karto xiriir, codsigu wuxuu u baahan yahay rukhsaddan ...
Waxaan aaminsanahay in si aad u fuliso ficilladan aadan u baahnayn inaad yeelan karto rukhsad aad ku fuliso adigoon raalli ka ahayn, waxaan xooga saarayaa qaybta AQOONSIGAAGA!.
Waxaan u maleynayaa inaad is muujisay, xoogaa xiise ah waqtiga qorista.
Farriimaha lagu "diiwaangelinayo" lambarka taleefanka ee moobaylka.
Wac, markaad sheekeysan tahay waxaad siineysaa menu iyo wicitaan.
Mana sii wadi doono ...
Oo waliba waad gali kartaa internetka! Qiyaas inay ku siineyso inaad kala soo baxdo 5 gig oo kale. Helitaanka nidaamka faylka! Sidee ayey suurtagal ku tahay inay ugu baahan yihiin si loo badbaadiyo sawirada ama fiidiyowyada aan helno? Maqaalka gebi ahaanba xun, waxaan rajeynayaa jahliga oo aan aheyn isku dayga inaan ku beero jahwareer ku saabsan codsi si ballaaran loogu barto baraha kale.
Ku saabsan sida loo horumariyo barnaamij, wax fikrad ah malahan, sax?
Waxay umuuqataa in ayeeyday ay qortay boostada in aysan garanayn waxa ku saabsan waxaas, waxaad seegtay qorista wasá waadna qurxin jirtay
"Adiga oo aan ogolaansho lahayn" macnaheedu waa inay si toos ah u sameyso, iyada oo aan loo sii marin qeybta qalliinka ee ay taabato. Taasi waa, markaad wacdo, kuma soo diri doono qadka taleefanka ee qalliinka qalliinka waxayna kugu qasbeysaa inaad mar labaad riixdo batoonka, laakiin wuxuu si toos ah u soo wacayaa. Iyo wixii la mid ah.
Xaqiiqdii waxaad isku dabooshay sharaf ...
Jawaab Jesús Jiménez
Waxaan rajeynayaa inaad saxdo maqaalka ka hor intaan dad badani aqrin maxaa yeelay waxaad ku guuleysatay inaad ahaato qoraa wax ka qoro wax ku saabsan android si ficil ah maalin kasta. Tani waxay ku siinaysaa fikrad ah heerka balooggu u eg yahay.
Waxaan si daacad ah u aaminsanahay inaad qaldantahay. Oggolaanshuhu waa in la helo waxqabadka. Haddii aadan haysan karin rukhsad si aad u duubto codka, Android uma oggolaan doonto arjiga inuu marin u helo shaqeyntaas. Haddii aadan haysan rukhsad aad ku gasho kamaradda, ma awoodi doontid inaad sawirro ka qaadatid WhatsApp. Micnaheedu maaha inaad sameyso markaad rabto iyo ogolaanshahayaga la'aan.
Jawaab Jose antonio
Gebi ahaanba nasiib darro, Francisco. Midna kuma siineysid qoraalkan. Waxaa intaa dheer, waxaan si dhab ah uga fiirsan lahaa in aan tirtiro sida ugu dhaqsaha badan (waana u maleynayaa). Oggolaanshaha ficiladan waxay u baahan yihiin inay ku fuliyaan hawlahooda iyada oo hawlahaas la'aanteed, dalabku ma isticmaali lahaa ama tato.
Waxaas oo dhan waxay ka imanayaan cadaawad madow oo ka dhan ah WhatsApp, si daacadnimo ah. Waxaa lagu dhaleeceyn karaa inay tahay amni-darro, inay tahay shirkad mugdi ah oo madmadow leh, Yankee ama ku-xigeen ... laakiin waxa aad ku dhejisay boostada looma haysto xitaa tuutaha.
Jawaab Manuel Tornos
kor u kaca dijo
Hagaag faallooyinka ayay kaa saareen comments.
Ku jawaab uptheirons
Si aan u bilaabo dooda dhamaan faallooyinka la helay, waxaan rabaa in aan idhaahdo sida muuqata ma fahmin maqaalka ama waxaad aqrinaysaa kaliya waxa adiga ku xiisaynaya Waxaan ku celinayaa taas aniga WhatsApp waa sida ugu fiican ee loo adeegsado qaabka iyo wixii aan ku idhi maqaalkan ma doonayo in la ixtiraamo ama la iraahdo waxay ahayd xaasidnimo, kaliya waxaan ka faalloodaa in isla ogolaanshahaas isla codsi xun uu sameyn karo iyo ka noqo rabitaankooda iyadoon isticmaalehu dareemin. Tani waa suurtagal in nasiib daro horeyba ugu dhacday barnaamijyo kale iyo munaasabado ka badan inta aan dhamaanteen jeclaan lahayn.
In WhatsApp waa codsi la ixtiraamo macnaheedu maahan in haddii ay rabaan inay ku takri-falaan mudnaantan ama rukhsaddahan ay si fiican u samayn karaan.
Wax fikrad ah kama lihid barnaamijka, dabcan ...
Markaad sidan sameyso:
Ujeeddo wicitaan = Ujeeddo cusub (Ujeeddo.ACTION_DIAL);
call.setData (Uri.parse ("tel:" + lambarka));
waxqabadka Start (Intent.createChooser (wac, «Xulo qaabka wicitaanka:»));
Waxay kaa codsaneysaa rukhsad inaad si toos ah ugu wacdo lambarrada taleefannada ... Khadadkaasna, waxa kaliya ee aad heleyso ayaa ah inuu furmayo taleefanka wicitaanka ... ma ahan inuu wacayo digniin la'aan ... Waa run in beddelaadda ACTION_DIAL ee ACTION_CALL si toos ah ayuu wicitaanku u sameeyaa, laakiin si uu u arko cidda monguer-ka ah ee taas ku ridaya lambarka, maxaa yeelay waa la soo sheegi karaa.
ALA, fiiri haddii aad dhageysato dadka kuu sheegaya inaad naftaada nacas ka dhigeyso, maxaa yeelay gabi ahaanba waa sax.
Maya, laakiin hadda si dhab ah ... qayb ahaan waad saxan tahay, maxaa yeelay ACTION_CALL waxay ku weydiisataa rukhsad maxaa yeelay wicitaan toos ah ayey sameysaa, laakiin ACTION_DIAL ma weydiiso.
Hagaag, waxaan dhihi lahaa ficil ahaan waxkasta oo isticmaaleyaasha kale horeyba ugu sheegeen faallooyinka. Runtii maqaalkii baa yaabay. Waxaan rajaynayaa inay saxaan maadaama dadka isticmaala khibrad la’aanta ay rumaysan yihiin ka dibna waxa dhaca ay dhacaan.
Waxaad muujisay inaadan waxba ka ogeyn waxa aad ka faaloonayso….
U jawaab Tiitos
marka hore hubi ogolaanshaha qaar ka mid ah codsiyada aad u aragto inay ka badbaado dukaanka ciyaarta. Weli waad layaabi kartaa.
Marka labaad, sii waxyaabo kale oo rukhsad ah oo aad isleedahay waa inay beddelaan kuwa hadda jira. Tusaale ahaan, ogolaansho maxaad siin lahayd halkii aad "si toos ah uga wici lahayd lambarrada taleefannada"? Waxaad sidoo kale noo sheegi kartaa sida aan toos ugu wici karno xiriir toos ah WhatsApp anagoon haysan rukhsad.
Uguyaraan, waxaan u maleynayaa in erayga WhatsApp oo lagu beddelo Android qoraal ahaan lagu guuleysto. Iyagu waa rukhsadaha aad ku haysatid android waana inaad la qabsataa ama baabi'isaa shaqeynta.
Marka laga hadlayo badalashada magaca dalabka tusaalaha, gebi ahaanba waan saxanahay, waan isticmaali karay ereyga Android ama Codsiyada Android laakiin shaki la'aan erayga WhatsApp wuxuu leeyahay saameyn badan iyo fiiro gaar ah. Way cadahay in wax la mid ah ama ka xun laga odhan karo ogolaanshaha codsiyada sida Line, ChatOn, iwm, iwm.
Iyada oo dhammaan ixtiraamka adduunka, runti, laakiin qodobbada sidan oo kale ah waxay hoos u dhigayaan heerka baloogga, hooseeya laftiisa, eber. Francisco, ha isku dayin inaad ku tiraahdid faallooyinka "ma aadan fahmin bla bla ..." ama waxa ka sii xun, qiil u yeelo sida xun ee maqaalku ugu jiro "ma aanan fahmin" (waxaad noogu yeeraysaa doqon ama maxaa? ). Maqaalka si fudud ayaa khaldan oo xun. Ama waa inaad ka noqotaa si aanad u marin habaabin ugana digin si macno darro ah, ama aad daabacdo sixitaan, laakiin waxa ka sarreeya oo dhan, ha ku caayin sirdoonka akhristaha faallooyinka.
Ma aqaan halka aad ku aragto ujeedkeyga inaan caayo, wax xaqiiqda ka fogna ma jiraan oo waxaa mudan in wax walba hortooda lagu celiyo.
Waxaan fursaddan uga faa'iideysanayaa inaan weydiiyo su'aal ku socota dhammaan khubaradan xanaaqsan:
Haddii WhatsApp, Line ama codsi kasta oo leh rukhsadyadan oo dhan ay doonayaan inay ku dhaqmaan si xun, ma samayn kartaa iyada oo aan oggolaansho naga helin?
Hadda haa, Francisco, waxaad ku soo bandhigtay faalladaada. Laga bilaabo waqtiga aad dhahdo "aniga WhatsApp waa arjiga ugu fiican ee qaabka" waxaad naftaada u qalmaysaa aqoonta aad u leedahay aduunka ee Android iyo barnaamijyadeeda, waxaadna isa saareysaa heer aad u hooseeya oo adeegsade ah.
WhatsApp waa codsi aad u xun-xun, laakiin leh heer suuq gal ah oo la yaab leh. Wax intaas ka badan ma jiraan. Hadana haddii aad codsatay xoogaa isbeddel ah sanadkii hore (qoraalada codka, tusaale ahaan) waxaa ku riixay tartanka. Oo weliba sidaas oo ay tahay, shuruudaha amniga ee adeegsadayaasha horumarsan ay weydiistaan ​​iyaga ayaa sii wadaya inay ka boodaan dagaalka dibiga.
Habka aad ku bixiso faallooyinkaaga (wuxuu ahaa tusaale codsi) wuu fiicanyahay, laakiin inuu run yahay, laakiin waa inaad bedeshaa dhammaan ereyada maqaalka min madax ilaa cirib.
ha u xoog badnaan, waxaan u maleynayaa ujeedka maqaalka inuu fiicnaa, la soco arinta ruqsadaha ..., waxa dhacaya ayaa ah inaan si fiican loo soo bandhigin, iyo sidoo kale inaan ka soo qaadanay daqiiqada koowaad dhanka xun ..., laakiin ugu yaraan ahaanshaha blog-ka android-ka waxaad ku qori laheyd sawir WhatsApp ah android-ka oo aadan ku xirneyn ios.
Cañeros midkoodna, laakiin runtu waxay tahay in baloogyada loo baahan yahay inaad haysato waqti aad ku diyaariso maqaal ka hor daabacaadda, markaa uma muuqato mid halis ah in lagu daabacay khaladaad caynkan oo kale ah iyo wixii ka sarreeya ama fiiro gaar ah u leh faallooyinka aan u muuqan kuwo wax duminaya mabda 'ahaan hadaanay ahayn mid wax dhisaya si loo sameeyo qoraal wanaagsan.
Marka lagu daro dhammaan faallooyinkaas quruxda badan, wax kasta oo maqaalku sheegayo waa run.
Barnaamijku wuxuu ubaahan yahay dhammaan rukhsadahaas si loo sameeyo waxa ay bixiso peeeeero ...
... sidoo kale waad sameyn kartaa (wakhti kasta) waxa maqaalku leeyahay:
- Duub fiidiyowyo, sawirro iyo maqal.
- Akhriso, nuqul, isticmaal ama soo dir liiska xiriirka dhammaan xogtooda internetka.
- Wicitaanno samee oo SMS u dir goob kasta.
- Feyl kasta oo taleefanka ah uga dir internetka.
- Iyo waxyaabo badan oo ey ah.
Nasiib darrose, waxaa jira barnaamijyo badan oo weydiista rukhsaddo badan oo aanan ku xaddidi karin ... annagoon xidid ahayn.
Ku jawaab androllo
"Haddii WhatsApp, Line ama codsi kasta oo leh rukhsadyadan oo dhan ay doonayaan inay ku dhaqmaan si xun, ma sameyn kartaa iyada oo aan oggolaansho cad naga helin?" Haa, waanu kuu sheegaynaa, laakiin qoraalkaagu kama hadlayo "halista oggolaanshaha arjiga ee ku jira Android" ee wuxuu ka hadlayaa "liiska oggolaanshaha la buunbuuniyey ee aan siinno WhatsApp". Ku rinji midab kasta oo aad rabto, laakiin dhammaantood waa qalad bilowga.
By habka, xakamaynta rukhsadda Android maahan mid ku habboon laakiin ka warran xakamaynta oggolaanshaha macruufka? (Waa su'aal daacad ah, laga bilaabo wadarta jahliga iOS).
"WhatsApp waxay leedahay saameyn badan iyo feejignaan badan"
Miyaad ka mudnaan siinaysaa saameynta runta wararka? Taasi waxay leedahay magac: saxaafadeed jaalle ah.
"Haddii WhatsApp, Line ama codsi kasta oo leh rukhsadyadan oo dhan ay doonayaan inay ku dhaqmaan si xun, ma sameyn kartaa iyada oo aan oggolaansho cad naga helin?"
Qof kastaa wuu ogyahay in amniga android uu daciif yahay ... sida daaqadaha iyo nidaamyada kale ee ku shaqeeya ...
Waxaan ku adkeynayaa, maqaalka macno buu yeelan karaa haddii aad WhatsApp ugu beddesho Android, laakiin dabcan "WhatsApp waxay leedahay saameyn badan iyo feejignaan badan."
Sida iska cad, codsi kasta oo ogolaansho haysta, wuxuu u isticmaali karaa ogolaanshahaas si sax ah, ama si xun. Su’aashu waxay tahay “sumcadda” laga yaabo inay horumariyaha / shirkaddu yeelan karaan, inay ku aaminaan adiga iyo in kale. Waxaad siin kartaa furayaasha gurigaaga hooyadaada, iyo qashinka ku jira geeska, umana badna in hooyadaa ay gurigaaga soo dhacayso, laakiin awoodo inay sidaas sameyso, wey awoodaa.
"Aniga qudhaydu waxaan ahay qof si daacad ah u isticmaala WhatsApp-ka waxaanan u malaynayaa inay tahay sida ugu fiican ee loo adeegsado qaabka, ma fahmin sababta xadigan rukhsadda loo sababeeyay, oo ay ku jiraan kuwa runti aanan fahmi karin"
- >>>>>> Weydii kuwa aan fahmin inaan kuu sharaxno
"Codsigan runti ma wuxuu u baahan yahay inuu awood u yeesho inuu adeegsado xulashooyinka noocan oo kale ah ee ka imanaya terminaalkeena?
- >>>>>> Haa, haddii aad rabto inaad ka soo wacdo WhatsApp, oo aan aad ugu habboonaado, waxaad u baahan tahay oggolaanshaha wicitaanka. Haddii aad rabto inaad isdiiwaangaliso, SMS-ka. Hadaad rabto inaad dirto sawir, midka kamarada lagu galo. Waxaad ubaahantahay marin uheel nidaamka faylka hadii aad rabto inaad dirto fiidiyoow ama sawir horey loogu duubay boosteejadaada. Makarafoonka, si loogu diro qoraalada maqalka ... dheer iwm
Sidaan idhi, tan rukhsadaha ku jira codsiyada ku jira Android waxay noqonaysaa in waxyar uun laga xakameeyo Google isla markaana kaliya la ansixiyo kuwa run ahaantii lagama maarmaanka u ah hawlgalka saxda ah ee codsiga la sheegayo.
- >>>>>> Google ma xakamayn karo rukhsadaha, maxaa yeelay iyagu waa rukhsad, adiga ayaa ah qofka ay tahay inuu xakameeyo. La'aantood "rukhsadaha ay tahay in Google xakameeyo" ee aad faallo ka bixiso, WhatsApp wuxuu noqon lahaa sheeko qoraal, muddo. Miyaanay sidaas kula sii fiicnaan doonin?
«Awoodaha aan siinnay codsiyada sida WhatsApp, waad ogtahay, marka laga reebo xogta gaarka ah ee ay naga soo ururiyaan, waxyaabaha kale ee ay yeelan karaan. Duubista maqalka? Muuqaalo gaar ah iyo fiidiyowyo? Runtu waxay tahay inay iyagu ogaan doonaan oo keliya maxaa yeelay waxa dhabta ah ayaa ah in rukhsadaha lagu fulinayo falalkan la siiyay »
- >>>>>> Digniin! Amarillismo iyo shirqool !!!
Sikastaba, kuu sheegi maayo wax aysan asxaabta kale horey kuugu sheegin, laakiin maqaalka sida uu yahay waa qashin saafi ah. Kuweena aan waxoogaa fikrad ah ka helno xukunka afraad, iyo dadka aan wax fikrad ah lahayn, waad u jahwareerinaysaa sabab la'aan. Haddii aad rabto inaad ka shaqeyso maqaal amni oo ku saabsan Android, waxaad haysataa waxyaabo badan, laakiin wixii aad geysatay ma shaqeynayo xitaa barta ugu caansan ee Apple-fan.
Dib-u-hagaajintu waa mid caqli-gal ah, inkasta oo sida ku xusan khadka jawaabahaaga ee faallooyinka, ay i siinayso inaan si fiican ugu fariisanno kursi.
Jawaab Alvaro M
Qalabka Dayactirka dijo
Si aad u aragto qodobka ma aha inuu sheegayo wax been ah, laakiin fekerkeyga waa wax qeylo dhaan ah. Waa run in WhatsApp ay weydiisato rukhsad aad u tiro badan laakiin waa iyaga la'aantood qaar badan oo dheeri ah aysan shaqeyn lahayn, sida dirista farriin la duubay ama si toos ah uga soo waca cinwaanka isticmaalaha.
In badan oo idinka mid ah ayaa qoraaga ka codsanaya inuu tirtiro boostada markii uu si hufan ula socdo dabka aad ku guuleysaneysaan caksiga, in dadka soo booqda ay guuraan sidaas darteedna ay halkaan sii joogaan iyadoo madaxaagu sarreeyo.
Ku jawaab Coper Fix
Qalabka Dayactirka. Waxaad dhahdaa "waa run in WA ay weydiisato rukhsad aad u tiro badan laakiin waa in la'aantood aysan shaqeyn lahayn ..." Marka, xagee ku heshiinnaa? Miyay aad u badan yihiin? Mise waa kuwa aad u baahan tahay? Haddii aad u baahatid iyaga, iyagu waa hagaagsan yihiin, haddii aad weydiisato helitaanka furaha sirta ah ee Wi-Fi, hubaal taasi way kugu badnaan lahayd, laakiin si aad u hesho (oo u keydiso) sawirrada iyo fiidiyowyada, waa inaad meel uun ku duubtaa. .. waxaan leeyahay sax?
Marka, haddii aysan run ahayn inay weydiisato rukhsad aad u tiro badan, cinwaanka boostada (WAAN KU SOO KOOBAY: «liiska rukhsadaha la buunbuuniyey ee aan siinno Whatsapp)) waa, qeexitaan ahaan, hubin la'aan (ama been ah, ama BEEN) , wax kasta oo aad rabto inaad u wacdo).
In badan oo INRI ah, qorista qoraalka waxay ku saleysan tahay aragtiyaha iyo hadalada qaarkood ee caadiga ah ee neophyte buuxda ee nidaamyada hawlgalka marka loo eego "xamaasad ku saabsan xisaabinta" (sida Francisco naftiisa ugu qeexayo astaantiisa wordpress).
Ololku xitaa wuu fiicnaan karaa, iyadoo kuxiran taariikhda ama munaasabadda (ama waxay kuxirantahay mowduuca), laakiin muddada dhexe, saameynta ay inta badan gaaraan ayaa ah mid ka soo horjeedda waxa la doonayo waxaana jira hoos u dhac ku yimaada booqashooyinka (dadku waxay joojiyaan aaminaadda, Iyagu waxay ka saaraan rukumintooda rss, ama waxay joojinayaan inay gujiyaan xiriirinta haddii ay ka yimaadaan bartaas, si ay uga fududaan karaan).
Ma jiro blogger culus oo waligiis u aqbali doona ololka inuu yahay maqaal la aqbali karo.
Waxaad su aasha ka qaadaysaa gebi ahaanba macnaha guud, wax kasta oo aan ku faalloodo ama ku sharaxo halkan waa xaqiiqda ugu nadiifsan oo aan lahayn wax alifaad ah. Waxaan ku celinayaa in qofna uusan ku kalsoonayn WhatsApp iyo sumcaddiisa wanaagsan, anigu waxaan ahay qofkii ugu horreeyay ee ku rakibaya. Laakiin miyaadan u maleyneynin inay tahay boodbood weyn oo iimaan inaad siiso kalsoonidaada oo dhan codsiyada qaabka kaliya sheeganaya ixtiraamkooda iyo shaqadooda wanaagsan? Miyaadan u maleyneynin inay tahay kalsooni xad dhaaf ah iyo in aysan jirin meel taas loo oggol yahay oo aan loo oggolaan codsi awood u leh inuu sameeyo falalkaas haddii ay u aragto inay habboon tahay annaga oo aan oggolaan?
Inta soo hartay, waxaan ku celinayaa inaanan u arkin inay cidna cabsi gelinayso ama wax u dhimayso WhatsApp, waxaan kaliya tixraacayaa xaqiiqooyinka iyo rukhsadaha dhabta ah ee ay u baahan tahay oo waxaan siinaynaa WhatsApp.
tani waxay lamid tahay adeegsiga keygens-ka ... waa bilaash wax walbana waa hagaagsanyihiin, qof walbana wuu difaacayaa oo wuxuu dhahaa maya, sidee noqon kartaa ... ilaa maalin uun aad falanqeyn ku sameyso kumbuyuutarka oo aad ogaato inaad virus kale leedahay marka laga reebo keygens-ka ... in antivirus-ka uusan sii bixin wax been abuur ah, tanina waa lamid, wixii shey antivirus u ogaado inuu yahay virus, haday tahay android, wax oy dhaheyso AADAN AQBAL KA AHAN, hadii kale ma dhihi laheyd in, wax antivirus-ka android-ka uu kaaga digayo in barnaamijyada qaarkood ay qatar geliyaan arimahaaga gaarka ah, laakiin hey, cidina ma rabto inay qirto, maadaama aysan jeebkooda heysan waqtigaan, dhamaantood waxay ka soo horjeedaan maqaallada sidan oo kale ah, salaan fran
Run Manuel, waxaan ula jeeday inay weydiisato rukhsad aad u tiro badan marka la barbar dhigo codsiyada kale. Runtii way fiicantahay hadii kuwa aad codsato ay yihiin kuwa aad isticmaasho.
Francisco, waxaad dhaheysaa inaadan tixgelin inaad qof walwal gelinayso ... Kaliya cinwaanka horeyba wuxuu uga tagay jir xun.
Aniga oo aan sii sii socon, waxaan marar badan wax ka qoray whatsapp-ka degelkeyga, ma aha codsi aan dareemayo qaddarin weyn, laakiin waxa ay qabato, waxay ku sameysaa ogolaanshaha isticmaaleha kaas oo ah kan ku garaacaya wicitaanka iyo yaa diraya sms (lacag la siiyay).
Wax kastoo ay gudaha ka qabato, waa inaan aaminsanahay waxa WhatsApp inc ku yiraahdo sida guud ahaan caalamka gaarka loo leeyahay.
Dhanka kale, xitaa haddii aad haysatid rukhsad inaad sawirro ka qaaddo, miyaanay sharci darro ahayn inaad sawir ka qaadatid isticmaale adiga oo aan raalli ka ahayn? (weedh aad ku muujisay casaan)
Ku jawaab Marcossit
Ku saabsan habka loo qoro maqaalka oo aan ku jirin nuxurka. Waxaan bartaa isgaarsiinta maqalka, halkaasoo ay ka jiraan maaddooyin ah saxaafadda iyo sida loo qoro wararka iyo qoraallada kale. Markaad tidhaahdo tusaale ahaan "ma fahmin maqaalka ama waxaad akhridaa oo keliya waxaad xiisaynayso", tifaftire waa inuu sameeyaa wararka, warbixinta, dib u eegista ama wax kasta oo ugu cad sida ugu macquulsan. Haddii akhriste uusan "fahmin", waxaa iska leh tifaftiraha. Haddii aad dooneysay inaad dhigto WhatsApp si aad u soo jiito feejignaan dheeri ah halkii aad ka heli laheyd waxyaabo kale oo kale oo ay ku siinayaan, ha ka cabanin haddii aan loo fahmin sidaad dooneysay, maxaa yeelay waan ku celinayaa, qaladku ma ahan akhristaha kiisaska 95%.
Waxaan u maleynayaa in maqaalka si wanaagsan loo qoray maaddaama laga eego dhinaca u nuglaanta dhibaatada dhibaatadu waxay tahay iyada oo oggolaansho badan oo WhatsApp leedahay, qof kasta oo aqoonta ugu yar ee Horumarinta ka faa'iideysan kara tan oo abuuri kara albaab dambe oo lagu xakameeyo aaladda disestra ama xun. Waxaan u maleynayaa inay doorbidi laheyd nuglaanta ay Android leedahay iyadoo la siinayo rukhsad badan barnaamijka. Aniguna waxaan leeyahay badankood ha soo dejisan apk aan la garanayn ama waalan waxkastoo ay halkaas ku arkaan. Laakiin haddii dad badani jecel yihiin khiyaanooyinka ciyaaraha iyo barnaamijyadan wax laga beddelay ma garanayaan cidda ku abuurtay qaabkee loogu abuuray, ma haystaan ​​caddeyn Google oo waa marka nidaamku bilaabo inuu dhibaatooyin bixiyo. Waxaan sharad galiyay in WhatsApp + oo lagu daray abuurihiisu waa inuu ku hayaa keydka xogta lambarka iyo sawirka mid kasta oo ka mid ah kuwa adeegsada barnaamijkan, xitaa waan sii wadi karaa oo waxaan uheli lahaa shaandheyn sawirro ah intaanay ka gaadhin server-ka WhatsApp, mara qaar ka mid ah kaaga oo ku habboon sawiradan. Wax walba waa suurtagal laakiin waa inaan ka taxaddarnaa waxa aan ku rakibeyno taleefannadeenna iyo in kale.
Taasi waa wax aad u wanaagsan, laakiin qodobkaasi kama hadlayo arrintaas, kama hadlayo rukhsaddaha ku jira codsiyada, kama hadlayo barnaamijyada lagu helo qaabab kale oo aan ka ahayn dukaanka ciyaarta iyo halista ay la imaan karaan ... ayaa leh «Whatsapp Wuxuu leeyahay ogolaansho badan mana ogin waxa ay ku qabanayaan." Wuxuuna la yaaban yahay waxa uu ugu baahan yahay iyaga, markaan horeyba u cadeynay waxa ay ugu baahan yihiin.
Adiga oo kuu dhigaya inaad ka fikirto sidaas, Android waxay leedahay DHAMMAAN rukhsadaha, oo haddii berri, Google ay go'aansato inay xado lambarka kaarkaaga deynta, way sameyn doontaa, sida WhatsApp ay ugu heellan tahay inay ku faafiso sawirrada carruurtaada boostada, ama facebook ayaa Gali faallooyinka midabtakoorka adiga oo ku hadlaya darbiga asxaabtaada. Marka loo maleeyo iyo helitaanka nacasnimo, yaanay noqon.
Akhrinta sharaxaada, ujeedka maqaalku wuu fiicnaan karaa, laakiin wuu ku ekaaday intaas, horumarkiisa waa masiibo. Waxaan aqriyaa boggaga Android / news / iwm maalin kasta (waa shaqadeyda), marna ma aanan dareemin wax ka badan ujeedka ah in la abuuro cabsi-gelin (aan qiil lahayn), oo ka dhan ah codsi gaar ah (aasaas la'aan)
Francisco, wali waad ku madax adag tahay wax aan shuqul ku lahayn.
Android, xaaladdan, waxay bixisaa caddayn iyo faahfaahin faahfaahinta ah ee nidaamyada kale ee hawlgalka (iOS, Windows ama xitaa Linux) aysan bixin. Ma ogtahay waxa ilaha kombiyuutarkaaga ku jira (shabakad, disk, Photoshop ama Office ay heli karaan? (Waxaan kuu sheegayaa: gebi ahaanba WALBA).
Xaaladdan oo kale Android ayaa kuu digaysa. Taasi waa fiican tahay. Laakiin labadeenaba (iyada oo loo marayo tabarucaadeena ku saabsan qiimeynta Google Play iyo faallooyinka) iyo Google lafteeda (iyada oo loo marayo xakameynta barnaamijyadan) waa kuwa xakameynaya soo galitaanka barnaamijyada xun.
Nidaamka ruqsadda Android wuxuu u taagan yahay inuu INFORM US, maahan inuu ALERT US. Waa shayga ugu caansan adduunka in WhatsApp ay yeelato rukhsad si ay u gasho kamarada iyada oo aan ogolaansho qaas ah naga haysan (waxaa loo maleynayaa inaan horey u siineyno iyaga markaan tusno inaan dooneyno inaan dirno sawir kamarad lagu qaaday). Isla si loo badbaadiyo fiidiyow ay noo soo diraan. Qiyaas sida dhibta ay u noqon karto haddii mar kasta oo uu doonayo inuu wax qabto, wuxuu ku qasbanaa inuu si cad noo weydiisto ogolaansho (iyo waxyaabo kale, xitaa ma uusan xiriiri karin).
Laakiin waxaan ka sii baxaynaa gacanta. Arrinta cabashooyinka faallooyinka ayaa ah (xitaa kuwa badan oo cadowgooda ah WhatsApp aniga oo kale ah), oo lagu muujiyey Roman Paladino, in maqaalka si xun uga hadlayo WhatsApp sababo la xiriira rukhsaddiisa; in rukhsadyadan ay yihiin kuwo caadi ah marka loo eego astaamaha barnaamijku bixiyo iyo haddii, sida uu qoraagu ku adkeystay inuu ku celiyo, maqaalku wuxuu ku saabsan yahay nabadgelyada Android, cidina ma fahamsan tahay, khaladku wuxuu ku jiraa akhristayaasha nacasnimada ah maxaa yeelay ma fahmin ... waa inay noqotaa inaynaan akhriyi karin inta udhaxeysa khadadka iyo halka ay ku qorantahay "liiska ogolaanshaha la buunbuuniyey ee aan siino WhatsApp" waxaa loola jeedaa "imisa rukhsad ayay codsiyada android weydiistaan, haye", laakiin myopia-na ma ogola si aad u aragto macnaha dhabta ah ee qoraagu ku siiyay. (sic!)
U fiirso inaan necbahay WhatsApp (Waxaan tirtiray wax ka badan sanad ka hor sababo badan awgood waxaanan isticmaalaa LINE halkii) laakiin maqaalkan waad ku dhaaftay. Kaliya wixii ka maqnaa si aan u joojiyo akhriska balooggan, waxaan ka saarayaa RSS.
Ku jawaab davinci
Cusboonaysiinta ugu dambaysa ee whattsap ee ku jirta android waxay si cad u sheegaysaa, ogolaanshaha kamaradda: «waxay u oggolaaneysaa arjiga inuu sawirro ka qaado ama ku duubo fiidiyowyo kamarad. Oggolaanshahan ayaa oggolaanaya arjiga isticmaalka kamaradda wakhti kasta adiga oo aan lagaa haysan oggolaansho »
Xukunkaan dambe wuxuu umuuqdaa mid aniga igu xadgudbaya. Maaha in barnaamijku marin u helo kaamerada ama sawirka si aad sawirro ugu diri karto. Laakiin waxay u muuqataa in abku, haduu doono, uu awoodi doono inuu sawiro kaa qaado adigoon ogayn. Aniga ahaan barnaamijkani waa inuu cadeeyaa sababta Google u ogolaado ogolaanshahan
Uga jawaab digaag
Aan aragno, ma fahmin aasaaska: Oggolaanshaha Android.
Waxa kaliya ee laga sheegayo "AQOONSIGA AH" - ogolaanshahaagu waa inaad siiso arjiga X ogolaansho. Mar alla markii aad siiso rukhsaddaas arjiga, maxaa yeelay wuu u baahan yahay, nidaamka (Android) ma kala sooci karo haddii codsigu sawir qaadayo sababta oo ah adigu waxaad siisay badhanka, ama haddii ay tahay maxaa yeelay waxaa loogu talagalay inay sawir qaaddo. 15 daqiiqo kuna dir e-maylka gaarka ah ee Obama.
In android, in la oggolaado ama aan la oggolaan waa in la siiyo rukhsad ama in aan la siin. Google way ka digeysaa, hadaadan raali ka aheynna, wey fududahay sida aan loo rakibo arjiga. Haddii oggolaansho la codsado mar kasta oo rukhsad la isticmaalo, moobaylku wuxuu noqonayaa mid aan la isticmaali karin, maxaa yeelay waxaan nolosheena ku qaadan doonnaa "Haa"
Ma ahan "adiga la'aantaa fasax la'aan," waa "adiga oo aan lagaa haysan ogolaansho." Taas oo waliba qalad ah. Waxaad siisaa rukhsad markaad rakibto. Sida codsi kasta oo aad ku rakibto daaqadahaaga, waxaad siineysaa ogolaansho (xitaa haddii nidaamka qalliinka uusan kuu sheegin) si aad u gasho kamarada webkaaga ... waad ogtahay, ama ma ogid ... way kuu digeysaa , ama kuuma digeyso.
Maamulka codsiyada waa in had iyo jeer sidoo kale lagu saleeyaa nidaam lagu kalsoon yahay (Waxaan aaminsanahay in arjigu yahay mid la aamini karo kamana shidi doono kaamerada kaligiis oo ima duubi doono aniga oo fadhiya suuliga)
Haddii aad ogaato, isla ogolaanshahaas waxaa haya Line, BBM, WeChat iyo Hangouts. On KitKat-kayga Android, wuxuu tixraacayaa rukhsadda sida "U oggolow barnaamijka inuu sawirro ka qaado ama ku duubo fiidiyowyo kamarad. Oggolaanshahan ayaa u oggolaanaya arjiga isticmaalka kamaradda wakhti kasta adigoon xaqiijin. Si fiican u aqri: HUBINTA, oo aan la mid ahayn OGOLAASHADA. Ka raadi iyaga qaamuuska hadaadan i rumaysanayn. 😉
Looma baahna in la xaqiijiyo oggolaansho horey loo siiyay (waqtiga rakibidda).
Sidoo kale qaar ka mid ah kuwa kale waxay leedahay ogolaansho isku mid ah "Telefoonnada taleefanka" waxayna leedahay "Waxay u oggolaaneysaa arjiga inuu wicitaan ku sameeyo adigoon isticmaaleha dhexgelin, taasoo u horseedi karta wicitaanno lama filaan ah ama eedeymo Fadlan ogow in codsiyada aysan u adeegsan karin adeeggan si ay ugu wacaan nambarada xaaladaha degdegga ah, laakiin codsiyada xun waxay kuu sababi karaan kharashyo aan la filayn adiga oo wicitaanno sameeya adigoon xaqiijin.
Waana taas, si kasta oo aan u siino, Android waxay ku egtahay INFORM US ogolaanshahan codsigu u baahan yahay (taas oo horeyba uga BADAN waxa ay nidaamyada kale ee hawlgalku bixiyaan).
Miyaad ku adkaysanaysaa in tan la aasaasay?
Miyaad ku dhiiran kartaa inaad sii waddo difaaca qadarka macno darrada ah ee aad gelisay?
Miyaad ku adkeysaneysaa inaad ku jahwareerto codsiyada halkii aad ka isticmaali lahayd android?
Qof kastaa miyuu wax ka qaadaa macnaha guud? Waxaad ka mid tahay kuwa dhaha laba siyaabood ayaa wax loo arka, mid aan arko iyo mid qaldan.
Waxay ku siiyeen tusaalooyin aad u cad.
Sawirrada barnaamijka IOS halkii laga isticmaali lahaa android-ka ayaa ah cawska ugu dambeeya ...
Waxaan kuu xaqiijinayaa in mareegtani ay lumisay maanta akhristayaasha.
Had iyo jeer waa isku mowduuc, waa mas'uuliyadda shirkadda ama arjiga inay sheegto rukhsadda ay u baahan tahay, taas oo ay ku sameyso kiiskan iyo mas'uuliyadda isticmaalaha inuu akhriyo oo aqbalo haddii ay oggolaadaan iyo in kale. Haddaynu ku dhex nool nahay bulsho wax saxeexaysa oo aqbalaysa iyada oo aan loo akhriyin raaxaysi ama caado, khaladku waa cad yahay bulshada Raaxada iyo asturnaanta maahan 2 arrimood oo aad isula jaan qaada maalmahan.
Ku jawaab rom3ox
Ma aqrin dhammaan faallooyinka, laakiin waa igu filan inaan arko halka rasaastu u socoto. Waxaan u maleynayaa in qof kastaa uu leeyahay wax yar ama badan sabab (kuwa la akhriyo), sidoo kale Francisco, oo leh hal digniin, rukhsadaha ay WhatsApp weydiiso ma ahan dhibaato Android, waa dhibaatada isticmaalaha, oo xitaa weydiisanaya rukhsadahaas ayaa rakibaya. . Waxaan u maleynayaa inay jiraan kiisas dhiig badan leh, sida kuwa Facebook, oo ah 2 ama 3 cusboonaysiin ah oo aanan cusboonaysiin.
Waxaan sidoo kale ku raacsanahay Francisco markii uu tilmaamayo in rukhsadyadani ay isaga siinayaan awood uu ku wici karo markasta oo uu doono, runtu waxay tahay inuusan adeegsan adeegsigaas (waxay ku sii jiri doontaa nidaamka wicitaanka nidaamka) laakiin wuu awoodaa.
Kuwa dhaha inay jiraan codsiyo aad ugafiican sidoo kale waa sax, runti, feker ahaanteyda, WhatsApp maahan mid fog. Wuxuu ahaa mid nasiib badan ama indho badan, ma aqaano.
Waqti aad u badan ha la qaadan Francisco, been ma uusan dhigin, kaliya tarjumaado xoogaa la buunbuuniyey, muhiim maahan in dhiig la sameeyo, haddii aadan jeclayn balooggiisa ka saar macaamilkaaga RSS.
Jawaab Oscar C.
Ma aqaan waxa murugada badan leh haddii maqaalka ama jawaabahaaga.
Waayadan dambe tayada qoraaladaadu si cabsi leh ayey u sii yaraaneysaa. Waa maxay maqaal aan micno lahayn.
Ku jawaab Diegazo
Waan ka xumahay laakiin… Naftaada u hur wax kale… .. markasta oo aan akhriyo waa ka sii liidataa !!!!
Ku jawaab goobta
War weyn Francisco. Waxaan sidoo kale "kufariirinayaa" rukhsadaha whatsapp. Marwalba waan awoodaa inaan sawiro iyo muuqaalo kasoo qaado WhatsApp ama aan ka helo isla barnaamijka kadibna u diro dadka aan la xiriiro. Waan ku celinayaa, tan iyo markasta. Hadda waxaa soo baxday in cusbooneysiinta cusub ay ku darayaan rukhsad weydiisanaya in laga qaado sawirro iyo fiidiyowyo iyada oo aan la helin oggolaanshaha isticmaalaha. Uma arko sabab macquul ah taas tan iyo markii aan marwalba awood u lahaa inaan sawiro iyo fiidiyoow qaado waxa kaliya ee aan arko ee kudarsada taasi waa awooda isticmaalka rukhsadaha si xor ah oo aan ogolaansho lahayn. Qof kastaa aad buu kuugu xanaaqsan yahay, sida ku dhacday kuwii runta ka sheegay Google oo hadda aad uga aamusan arrinta albaabka dambe ee ay basaasnimada uga tageen. Wax kale odhan maayo. Waad ku mahadsantahay wadaagida tan. Hadday dadku kugu raacsan yihiin iyo haddii kaleba, si loo isku dayo in kor loogu qaado wacyiga khataraha rukhsadahaasi yeelan karaan, horayba waa loo qiimeeyay. Salaan!
Jawaab ku celi
Cago iyo madax midna ma leh waxayna umuuqataa in qaar badani dhahaan jaahilnimo guud oo ku saabsan sida rukhsadaha Android u shaqeeyaan. Haddii maqaalka loo samayn lahaa naqdin nidaamka ogolaanshaha Android, waan fahmi lahaa laakiin kama hor imaan karo codsi gaar ah oo u baahan rukhsadahaas inuu shaqeeyo taasna ma sameyn karto adigoon raalli ka ahayn maadaama ay ku weydiineyso markaad rakibineyso haddii aad aqbasho ama ha - sida codsi kasta oo kale-. What whatsapp ma aha arjiga ugu amaanka badan aduunka sababo kale awgood oo aan gebi ahaanba la xiriirin waxa halkan lagu sharaxay waa hal shay laakiin waxa halkan looga hadlay macno malahan Qoraal aan micno lahayn.
Haddii WhatsApp ay xor noqon lahayd oo la baahin lahaa, waxaas oo dhan kuma dhaceen dadka waaweyn. Sugaya! Taasi way jirtaa! ISTICMAAL JABBAR OO INTA BADAN KA TAG MAXAY $ APP !!
Hagaag ... hareeraha internetka anigoo raadinaya macluumaad kale, halkan ayaan imid. Anigu ma ihi horumariye, mana ah khabiir ku takhasusay Android. Waxaan hayaa taleefannadayda gacanta iyo kiniiniyaddayda "xidid", sidaa darteed waxaan ku xakameynayaa rukhsaddaha sayidka amniga LBE tan iyo markii aan arkay dhowr bilood ka hor in codsiyada qaarkood ay weydiistaan ​​rukhsad illaa iyo hadda aysan u baahnayn. Waan fahansanahay wax kasta oo la faaleeyay sababtaas awgeed, waxaan isticmaalaa ikhtiyaarka "ask". Sababtoo ah uguyaraan, wuxuu i weydiin doonaa goorta uu u baahdo.
Waxa aanan fahmin waa baahida, in la magacaabo; noocyada "Angry Bird", marka la eego ogolaanshaha goobta. Marka waxaan ka xusi karay dhowr. Dooni maayo inaan doodo, laakiin sida ay iyagu leeyihiin, Mid liimeed iyo mid ciid ah.
Waxaan kuugu jawaabayaa tafatiraha kahor (waxaan rajeynayaa) inaadan si qaldan u fasirayn doonin…. : p
Barnaamijyada bilaashka ah waxay badanaa weydiistaan ​​rukhsaddan si ay u horumariyaan xayeysiinta banner iyagoo soo bandhigaya natiijooyin ku saleysan goobta Salaan
Hagaag ... markii aan iska qoray, waxaan helay fariintaada Carlos. Mahadsanid, kuma aanan dhicin faahfaahintaas oo isu rogta mid si fasiraad leh u sharraxaysa maxaa yeelay codsi wuxuu leeyahay oggolaanshaha "Goobta". Taasi sidoo kale, xaaladaha qaarkood, waxay sharxi doontaa sababta codsiyada kale ay u leeyihiin rukhsad gaar ah oo aan markii hore la heli karin; waxay yeelan doonaan kaalin cusub.
Adaa mudan. Kahor intaanu cidna kahadlin, shalay ereyadiisii ​​Snowden ee The Guardian daabacay ee uu ku sheegay in NSA ay u adeegsatay Shimbiraha Xanaaqsan inay ka soosaaraan xogta laxiriira da'da, goobta, jinsiga, iwm. http://www.theguardian.com/world/2014/jan/27/nsa-gchq-smartphone-app-angry-birds-personal-data
Cajiib. Waxaan marwalba u maleynayay in amniga loo qaadayo mawduuca xogta shakhsiga ah; had iyo jeer way yar tahay tanina way caddaynaysaa. Sikastaba, marhore ayaa nalaga iibiyay.
Waxaan u maleynayaa inay la mid tahay "ree", waxaan isweydiiyaa isla su'aashaas, maxay ugu baahan yihiin rukhsadyadan cusub hadda hadda kahor intaanan u shaqeyn si dhammaystiran iyaga la'aanteed, iyo wixii ka sarreeyaba, sidee bay u heli karaan wakhti kasta? Ma heli doonaan xitaa haddii aanaan isticmaaleyn WhatsApp? Soosaarayaasha WhatsApp uma baahna inay ka walwalaan, maadaama ay jiraan malaayiin dad ah oo si otomaatig ah u cusbooneysiin doona, su'aal la'aan, ka dibna waxaan nahay wax yar oo baarayaal ah oo leh far (()) In aan sameyn doonno dhammaan baaritaanka iyo doodda aan dooneyno ka hor «saxiixa rukhsadaha si loo buunbuuniyey. Waan ka helay maqaalka, gaar ahaan maxaa yeelay waxay banaanka soo dhigeysaa malaayiin dad doqon ah oo xitaa aan aqoonin waxa ay ogolaansho u tahay. Kuwani waa kuwa ciyaarta u fura kuwa adeegsada xogtayada ujeeddooyin xun, in kasta oo WhatsApp aysan ahayn kiiska, ugu yaraan weli.
Hore ayaan u dhigay rukhsadaha cusub ee kaamirada kahor
Ugu dambeyntii cusbooneysii barnaamijka. Oo hadda waan fahmay waxa beddelaya. Hada arjiga laftiisa, waxaa jira ikhtiyaar ikhtiyaar ah oo leh sawir ama muuqaal fiidiyow ah oo kani wuxuu qaadanayaa sawir ama fiidiyoow wuxuuna si toos ah ugu dirayaa.
Kahor, waxay ahayd inaad isticmaasho barnaamijka kamaradda, sawir qaado oo aad la wadaagto WS, xiriiriyaha aad rabto. Marka ugu yaraan tani waxay sharraxeysaa baahida rukhsadda. Waxaa laga yaabaa iyada oo aan la rakibin cusbooneysiinta, rukhsaddan cusub ee kamaraddu aad bay u naxday laakiin markii la rakibo waxay ila tahay aniga ugu yaraan inay leedahay sababteeda. Midda kale waxay tahay inay u adeegsadaan oggolaanshaha qaab xaaraan ah oo aanan u maleynaynin
Naqshadaynta Webka dijo
Maqaal wanaagsan, waa uun wixii aan raadinayey, waa in lagu xisaabtamo nabadgelyadeena.
Ka jawaab naqshadeynta websaydhka
dareenka dhulkayga dijo
Gabi ahaanba waan ku raacsanahay ... waa taxane rukhsad aan loo baahnayn ah oo si khaldan u adeegsanaya asturnaanta adeegsadaha iyadoo loo marmarsiiyoonayo isticmaal ...
Ogolaansho si loo xaqiijiyo xisaabaadka tusaale ahaan? Wax macno ah ma lahan.
Ogolaansho lagu ogaanayo codsiyada kale? Ujeedo noocee ah? Kaliya xog uruurinta, macsalaameynta asturnaanta markale ... iyo dheer iwm.
Nasiib darro asturnaantu waa arrin aad u xasaasi ah oo in badan oo ka mid ah dadka isticmaala guud ahaan iyo kuwa badan oo halkan wax ku qoraa ay umuuqdaan inay iloobeen ama ayan aqoon, ceeb run ah !!!
Waa maxay rukhsadaha dabacsan? Waa maxay daaqadaha iyo waxyaabo kale? HA! Waxaad ku guuleysan kartaa amniga iyo asturnaanta Windows iyo waxyaabo kale ... ee Android maahan inaad xidid tahay mooyaane iyo xitaa haddii codsi uusan maamulin inuu fuliyo rukhsadda ma shaqeyneyso.
Google waa inuu noqdaa mid aad uga culus arintan isla markaana hubiya rukhsadaha dhabta ah ee loo baahan yahay ee codsiyada kahor intaanay u oggolaan daabiciddooda
U jawaab jawaab
Francisco Ruiz gabi ahaanba waa sax. Anigu waxaan ahay barnaamijiye, oo waxa dhaca waa in mar kasta oo WhatsApp-ka sida barnaamij kasta oo kale oo android ah uu doonayo inuu keligiis wax qabto, nidaamka hawlgalka ee android waa inuu ka gudbaa ficilka oo weydiistaa isticmaalaha moobiilka ogolaansho. Haddii aad rabto inaanan markale ku weydiin, isla daaqaddu waxay yeelan kartaa calaamadda si aynan mar labaad u weydiisan. Qaabkaas, waad ku siin kartaa rukhsadda rukhsad markaad isticmaaleysid, oo uma oggolaan kartid inaad keligaa wax ku sameysid waqti kasta adigoon ogeyn waxa ay qabato. Laakiin sida ay wax u jiraan, suurtagal ma aha in la isticmaalo barnaamijyada android ka, adiga oo aan marka hore surwaalkaaga hoos u dhigin oo aad ku kalsoon tahay inaysan ku siin dameerka. Intaas waxaa sii dheer, rukhsadaha waxay ku yimaadaan xirmooyin!, Taasi waa, kuuma ogolaanayo inaad tan doorato, haa, iyo tan maya. Si fudud waad aqbali kartaa ama aadan u adeegsan. Tani waxay ku beddelaysaa hal dariiqo oo keliya: waa inaad bilowdaa inaad diido barnaamijyada noocan ah oo aad mudnaanta siiso kuwa leh codsi habboon oo rukhsad ah. Android folks waa inay aad uga walaacaan amniga Linux Miyay Linux marwalba ahayn tan kor loo qaado calanka amaanka marka ugu horeysa marka Windows uu biyo ka sameeyo arintaan?… Ama amnigooda ma wuxuu ku salaysnaa xaqiiqda inay amaan tahay maxaa yeelay ma aysan haysan isticmaalayaal badan? Wuxuu kaa ilaalin karaa inaad marin u hesho qaybo gaar ah xitaa markaan ogolaansho siinno barnaamijka, mana sameynayo.
Wada sheekaysiga facebook wuxuu kormeeraa waqtiyada aad shidato shaashadda, shabakadaha iyo wax kasta oo ay kari karto tusaale ahaan. Markaad rakibineyso barnaamijyada waxay ku weydiineysaa inaad rabto inaad ku rakibto ama aadan rabin inaad ku rakibto waxa aan ahayn kiis gaar ah oo ah whatsapp Qofna difaaci maayo faallooyinka ogolaanshaha xad-dhaafka ah ee codsigan ama kuwa kale, waxaa kaliya la sheegay in maqaalka si liidata diirada loo saarayo isagoo tilmaamaya arji markay dhammaantood yihiin ...
Fariin aad ufiican, Francisco, kudhowaad wixii aan raadinayay. Xitaa waxaan dhihi lahaa waa hab ka hor waqtigaaga, taas oo adkeyneysa waxa loogu yeero "barnaamijyada maskaxda" si ay u milmaan. Aniga oo aan ka gaabin tan ama barnaamijyadan kale ee waxtarka leh, waxaan ku dhiirranayaa in aan saadaaliyo xilli ay wax waliba, gabi ahaanba wax kasta oo u gudba shabakadda lagu xakameyn doono laguna maamuli doono codsiyada. Waan ognahay inaan uga baahanahay inay helaan adeeg muhiim noo ah anaga oo markaa siinayna awoodo ay si sax ah ugu shaqeeyaan. Iyada oo ku saleysan tan iyo si ka sareysa kalsoonida ama aan ahayn nidaamka qalliinka ee ay ku shaqeyso: Maxaa ka fiican in la helo tirada ugu badan ee suuragalka ah ee sifooyinka? Oo waxaan la yaabanahay meeday dhammaadka tunnelka? . Maanta wali waxaan u aragnaa inay yihiin kuwo la isku halleyn karo, sida kiiskan oo kale, laakiin waxaan la yaabanahay maxay noqon doontaa yaase soo rogi doona xadka? Waxaa wanaagsan oo caafimaad leh in aan isweydiino su’aashaas oo aan ka shakinno laga bilaabo maanta. Sida laga yaabo inaad ogaatay, anigu si aad ah ugama dhex muuqan xisaabinta, laakiin ha ka fikirin inaad tirtirto qoraalkan, maxaa yeelay maalin uun ayaad awoodi doontaa inaad qof walba u sheegto: waan kuu sheegay, adna ima aadan rumaysan!
Ku jawaab xaaska
Maalmo ka hor whatsapp ayaa bilaabay inay igu soo wargeliyaan cusbooneysiin muhiim ah iyo tirinta 10 maalmood, markii aan isku dayay inaan cusbooneysiiyo layaabkeyga wuxuu ahaa xaddiga rukhsadaha la codsaday, anigu kama mid ahay kuwa sawirradooda iyo noloshooda ku dhajiya shabakadda, mana ogola in ay kashifaan xiriiradaada.
Waxaan hayaa Note2 wata 4.4.2 ditto oo waxaan ku rakibay app opps Startter, oo u ogolaanaya inuu xayiro rukhsadaha.
Cusbooneysiinta cusubi waxay ku weydiineysaa rukhsad loo soo diro sms / mms (Waan fahamsanahay inaad u isticmaashay inaad ku diiwaangeliso markii ugu horreysay) laakiin aniga waxay ila tahay inay dhacayaan.
Oggolaanshaha marin u helka wax iibsiga, taariikhda arjiga la rakibay, taariikhda daalacashada, calaamadaha, iyo taariikhda waxqabadka qalabka. Waxay ila tahay aniga in tani AAN loo baahnayn.
Helitaanka xogta Wi-Fi iyo aaladaha ku xiran.
(Looma baahna sidoo kale).
Sawirro iyo feylal fara badan, sidoo kale fayl iyo aalado dibedda ah.
(Fikradayda, haddii aad u baahan tahay inaad soo dirto sawir, nidaamku waa inuu ogeysiiyaa adeegsadaha marin u helka, oo u oggolaadaa kaliya xilligaas).
Baahnayn in la iraahdo, UMA maleynayo inaan cusbooneysiiyo illaa tan laga badalayo, waxaan ku noolaan karaa la'aan whatsapp
Aniga aragtidayda waa wax laga xishoodo, google-na ma ogola inuu ogolaado.
mid kale oo ka dhammaanaya wasakhda, waxay u baahan yihiin inay weydiiyaan lambarka koontadaada
Geesi Francisco, waxaan kuugu mahadcelinayaa maqaalka. "Saraakiil" aad u tiro badan oo WhatsApp-ka ka-reebis ah, ma lacag ayey qaadaan? Waxaan aaminsanahay sidaada iyo Carlos iyo kuwa kaleba, inaysan muhiim ahayn in la helo rukhsadahaas midkood.
Waxaan sidoo kale shalay ka qaaday Wassap maxaa yeelay, sida uu saaxiibkay Carlos halkan ka sheego, ma sharixi karo ogolaanshahan "Oggolaanshaha helitaanka wax iibsiga, taariikhda codsiyada la rakibo, taariikhda baalashada, calaamadaha iyo taariikhda waxqabadka qalabka"
Wixii jahannamada ah ee aad rabto inaad ku aragto meesha aan ka helo internetka ama waxa aan ku sameeyo aaladayda, uguma baahna hawlgalka barnaamijka waxaanan kuu sheegayaa hal shay, barnaamijyada asxaabta, ee ku jira anshax xirfadeed wax macno ah kuma lahan wax badan ama waxba, taasi waa, haddii Berri ay tahay inaad hesho codsi ururiya xisaabaadka bangiga si aad u daboosho naftaada, waxaad sameyn doontaa shaki la'aan.
Ii wac shirqool laakiin waligey rakibi maayo apk ama codsi burcad-badeed ah Windows, maxaa yeelay iskuma kalsoona, xitaa kuma kalsooni Microsoft oo aad u maleysid in dhammaan barnaamijyada burcad-badeeddu ay ku kala baxaan shabakadda.
Waxaan sidoo kale ka qaaday whatsapp, rukhsadaha ay ku weydiineyso inaad kaliya dirto dhowr fariimood waa wax layaableh, taasi waa cabsi, waxaan doorbidayaa inaan ku sii wado smskayga lacag bixinta inta aan iyaga xakameeyo =).
Dhab ahaan, waxaan sidoo kale layaabay rukhsadaha ay WhatsApp ubaahantahay markay cusbooneysiineyso, (taas oo aan doorbido inay noqoto fariin kaliya, sidii markii hore ay aheyd, hadii taasi iska ilaalineyso aqbalida shuruudo badan) oo waxaan gareynaa heer halka midka, ogaanshaheena, iyadoo cudurdaarro kaladuwan, ay naga iibinayaan asturnaantayada. Taasi waa ujeedkeedu, mana jiro indhoole ka xun midka aan doonaynin inuu wax arko. Hababka isgaarsiinta, oo ay ku jiraan internetka, waa aaladda ugu fiican ee naga xakameyn karta meel kasta oo adduunka ah. Ma jiraan wax intaa dhaafsiisan oo lagu arko dhaqamada basaasnimada ee ay fulisay NSA. Hackers iyo fariimo dhageysi oo ka shaqeeya NSA Ma u maleyneysaa in midkan run yahay? Maxay isku dayayaan inay na jaajuusaan? Kaliya waa inaad feejignaataa, fiirsataa oo aad aragtaa sida ay u maareeyaan maalin kasta si ay u ururiyaan macluumaad dheeraad ah. Haddii ay ku xiran tahay shabakadda WiFi dhammaan macluumaadka TV-ga, PC-ga iyo taleefannada casriga ahi way isku xiran yihiin !! Waxay yaqaanaan dhammaan dhadhankeena, bogagga ugu badan ee soo noqnoqda, Kanaallada TV-yada ama barnaamijyada ugu badan ee la daawado, iibsashada, cayaaraha, muusikada la soo dejiyey, iwm. Shirkaduhu way na kormeeraan, waxay noo raadraacayaan si aan u ogaano dookhayada isticmaalkeena adoo adeegsanaya biraawsarkayaga, oo ay ku jiraan Facebook, Google iyo Microsoft. Miyaad u maleyneysaa in Khariidadaha Google ama Shimbiraha careysan aysan laheyn ujeedooyin kala duwan, ama websaydh fudud? Maxaad u dooneysaa kamarad hore? Araggu miyuu kafiican yahay kuwa ku basaasa? Sidee bay u maareeyaan! Runta? Waxaad ku haysaa codsi taleefankaaga gacanta ah oo haddii aadan aad u fiirsanayn oo aad barkinta ka dhigto, markaad ka hadlayso Facebook-ga, goobtaada saxda ahi way muuqataa, markaan si sax ah u idhaahdana, waxay aadeysaa jidka aad joogto! Qofka laga hadlayo xitaa ma oga! Waxay ku dabaqeen sharciga siinta aqoonsigeenna lambarka taleefankeena, haddii kale way baaba'aysaa. Waxay isku dayaan inay ururiyaan dhammaan macluumaadkayaga !! Oo miyaad weli u malaynaysaa inay tahay wax iska yimid? Ma maqashay Amarka Dunida Cusub? Kooxda Bilderberg? Waxtar ma leh in wax badan laga ogaado teknoolojiyadda ama barnaamijyada haddii aadan aaminin iyaga. Waxba kama qabtaan si kadis ah ama sabab, wax walboo waxay leeyihiin sabab, ujeedo, iyo kuweena soo jeeda, horay ayaan u ognahay waxa ay tahay. Kuwa dhaleeceynaya maqaalka, u sheeg inaysan noqon mid aad u feejignaan badan, oo qof walba uu dhihi karo waxaan ka tirsanahay shirkadda ama guddiga ayay qabtaan. Taasi waa wax aad u xun !!
Dabcan, waxay adeegsadaan xogteenna si ay u sameeyaan xayeysiis bartilmaameed ah oo ay lacag ku kasbadaan.
Ama maxaad u malayn? In Gmail cirka ka soo dhacayo? In server-yada Facebook ay dhulka ugu koraan sida baradhada oo kale?
Waxaad haysaa adeegyo qarsoodi ah, oo sir ah oo aan isticmaalin xogtaada gabi ahaanba, adoo bixinaya qiimo hooseeya. Ah, maya, in internetka uu xor noqdo.
Waxaan dooneynaa dhammaantood, iyo dhammaantood bilaash. Maxaa dhalanteed ah xD
Ugu dambeyntiina qof isku xiran ... dhammaantiin oo dhaleeceeya whatsapp rukhsadaha, miyaad si isku mid ah ugu qabataan adeegyada google? gmail wuxuu aqriyaa e-maylka si uu kuugu siiyo xayeysiin hadba sida aad uhesho, raadinta waxay ku saleysan tahay astaantaada, raadinti hore iwm ... Google waa wanaagsan yahay whatsapp / facebook-na waa xunyihiin Wax walboo waa inay la sameeyaan xaqiiqda ah inay xor ahaato ...
Taasi waa meesha ay wax u socdaan laakiin waa inay fahmaan inaysan ahayn whatsapp ama google, maaddaama aad isticmaaleyso kumbuyuutar si aad ula xiriirto, ha ahaato moobiil ama ha ahaato, macluumaadkaaga waa la jabsaday, waxa kaliya ee ay ku kala duwan yihiin waa iyada oo barnaamijka aad u dirto dhammaan macluumaadkaas halka mid kale Sidan oo kale, iyagu waa kuwa ay tahay inay soo uruuriyaan oo ay abaabulaan dhammaan macluumaadka iyada oo loo marayo diiwaanka codka, xitaa faraha, horeyba waxaa u jiray kaamarooyin amni oo boggag badan oo la jaan qaadaya barnaamijka lagu ogaanayo aaladda ay caanka ku tahay INDHAHA ILAAHAY. xaqiiqo ah in badan oo ay diidaan inay aaminaan sida markii aan aragnay James Bond oo sawir ku qaadaya taleefan. Waa hagaagsan tahay? Taasi waa khalad? Waxay kuxirantahay habka aad u aragto aduunka, baahida loo qabo in wax walba laga ogaado qof walba waa in aqoonta si dhaqso ah loo wadaago sidoo kale dad badan oo mahada ku haya teknolojiyaddu waxay soo saaraan waxyaabo yar yar sanad gudihiis oo qaadan lahaa qarniyadeenna caanka ah ee caanka ah. Waxay u keeni doonaan bani'aadamnimo isbeddello waa weyn, laakiin dabeecadda qofka bini-aadamka awgood, waxaa laga yaabaa in horay u sii weynaantiisa ay xumaato.
Wax la mid ah markii ay isku dayeen inay baabi'iyaan addoonsiga, waxaanan ula jeedaa inay isku dayeen sababtoo ah waxay karbaashka u beddeleen kaliya sharciyo, cuntada lacagta warqadda ah iyo silsiladaha taleefanka gacanta.
Ku jawaab tmp
gebi ahaanba ku raacsanahay «Edurne» .. tusaale ahaan .. waxaa jira ciyaaro u baahan helitaanka sawirro iyo waxyaabo badan oo warbaahinta ah .. haddii ay tahay ciyaar aan u baahnayn dirista sawirrada .. maxaad u dooneysaa inaad ka soo hesho kamaradayda iyo makarafoonkayga ?? .. Waa ciyaar ... Ma ahan inaan waco ama aan sawiro ka qaado ... marka ... waxaa jira codsiyo badan oo tan codsada, oo ay ku jiraan WhatsApp iyo haa ... mid baa maqal maqal ah .. sawiro .. iyo kuwa kale .. laakiin !! .. waxay u maleynayaan in taasi aysan aheyn Miyay u adeegsan doonaan macno labalaab ah ?? .. kaalay !!! .. waxaan nahay dad waa horeba .. maxaa yeelay facebook ayaa iibsatay whatsapp ???… maxaa yeelay fariimaha ayaa ka baxsanayay arjigaas .. iyadoo facebook iyo whatsapp dad badan ay la xiriiraan .. qofka celualr-ka ah ayay hore u yaqaanaan sida loola socdo iyo sifiican .. maxaa usii soconaya !! .. ma jiro indhoole ka xun midka samee ma doonayo in aan arko! ..
Ku jawaab cheesre
U sheeg borregomatrix runta oo way xanaaqi doonaan. Codsiyada waxay isticmaali karaan kaameradaada, makarafoonkaaga, goobtaada, dhagaysan karaan wadahadaladaada, fiiri sawiradaada, cinwaanadaada, saaxiibbada wejigaaga, iwm, iwm. Waa wax aad u qosol badan inay murugoodaan oo aysan rumaysan. Dhankayga, sii wad. Ma jiro indhoole ka xun midka aan doonaynin inuu wax arko. Waxay u jajaban yihiin xudunta waxayna madaxa u dhigayaan dhulka sida gorayada, Maxay nacasyada aan bedeleyno mararka qaarkood. Salaan.
Jawaab ku siiya Rusticiano Treveré
Waa inaan waqti yar ku lumino arrimahan oo aan bilowno inaan fiirino waxa aan runtii ku haysanno hareerahayaga.
Waa nidaamka qalliinka taleefanka gacantu inuu dhexgalo oo codsado oggolaansho marin u helidda waxyaabaha qaarkood (ha ahaato android, windows windows, mobile, ios, ama wixii kale oo Linux ah ama nidaamka hawlgalka gacanta). Wax sida xakamaynta isticmaaleyaasha daaqadaha, ama codsiga lambarka sirta ah (maamule) ee Linux, nidaamyada hawlgalka kumbuyuutarka. Android ma maamusho amnigan maxaa yeelay waxaa iska leh Google, oo ah kan ugu horreeya ee xiisaynaya helitaanka bilaashka ah ee macluumaadka gaarka loo leeyahay. Waxaan rabaa inaan ka saaro android-ka taleefankayga gacanta oo Ubuntu mobilka u dhigo.
bah, waxaa jira dad aan fahmin maqaalka…. Qodobka ugu muhiimsan waa wareejinta xogta, lafteeda (xogta hore) taasi waa isdhexgalka arjiga la rakibay ... waligood ma aysan hagaajinin wareejinta xogta ee codsi kasta sameeyo ama qadarka Mb ee codsiyada qaarkood u diraan iyaga oo aan sharaxaad ka bixin. Waan falanqeynayaa taas oo waxaan dhihi karaa whatsapp marka aan bilaabayo taraafikada xogta ama isku xirka Wi-Fi, mararka qaar wuxuu diraa ilaa 30 Mb oo ah macluumaadka moobiilka. (ogolaansho la'aan) iyo sifiican u falanqeynaya waxa ay dirto… waxay noqoneysaa macluumaad ka yimid raadinta biraawsarka, buugga xiriirka, fariimaha qoraalka ah ee la diray iyo sawirada lagu keydiyo xusuusta. taasi waa walaaca. Sababtoo ah lama oga ujeedka iyo ujeedka ay u uruurinayso dhammaan macluumaadkaas.
Faallo ku saabsan boostada Dario: Waxaan ku qori karaa faallo cusub laakiin waxaan kugu raacsanahay 100 × 100 adiga. Liiska rukhsadaha aad dhiibtaa waa wadar. Ma garanaysid waxay rabaan inay ku sameeyaan. Ma aha inaad la socoto gaar ahaan bini'aadamka saboolka ah oo ku xaddidan xayndaab aad u kooban. Taasi maahan. Waa Sharciga Tirada Badan. Uguyaraan cinwaanku aniga ayuu ila tusayaa, ma ihi xisaabyahan mana garanayo waxa ku saabsan. Laakiin luuqadda kaliya ayaa si cad u muuqata. Kaliya waxaan siinnaa alwaax. Sidee loo dhahaa? Maxaad raadineysaa Waxaan ku siinayaa, habka aan ku joogo, si aan kuugu farxo. Qaar badan oo ka mid ah shaqooyinka sidan oo kale ah, waxaan ahay taageere buuxda oo YouTube ah waxaana iga lumay liiska ay ii soo bandhigayaan. Wanaagsan yihiin
Whatsapp wuxuu sameyn doonaa wixii ka soo baxa caarada dhamaan rukhsadahayada. Iyaguna way fiican yihiin. Oo iyagu si sharci ah ayaa loo daboolaa maxaa yeelay iyagu waa Mareykan waxayna u qaataan si dhab ah. Sida Airbnb, oo aan idhaahdo ugu yaraan.
Marka si qoto dheer wax walba waxaa loogu tagay damiirka midkasta. Yaan u ogolaaneynaa inaan isku maamulno? Kaliya waxay rabaan lacag, waxay hubaan inay sidoo kale dareemayaan inay yihiin horyaallo ku yaal garoonka circus!
Ku jawaab nuria ribot
Saaxiibbadaa, waxaan u baahanahay caawimaad, qof fasax la'aan aniga ayaa iska dhigi kara sawir taleefankooda, ma la xiriiri karaa astaanteyda whatsapp iyo in marka aan sheekaysanayno, sawirkaas uu u muuqdo mid profile ah inkasta oo aanan haysan wax daabacan?
Su’aashu ma xanuujiso! Maxay dad badani u muuqdaan sabab macquul ah, kuwa kalena aan sidaa u badnayn, waana dabeecadda aadanaha in la baaro sababta waxyaabaha iyo waxyaabaha ku lug leh! Tani waa farqiga u dhexeeya kuwa noqda Hoggaamiyeyaal waaweyn iyo kuwa si fudud ugu nool noloshooda oo dhan iyagoo raacaya! ... Layaab iguma aha in faallooyinka badankood ee ku saabsan mowduucan ay yihiin kuwo aan u qalmin sidii su'aal macquul ah, maxaa yeelay adduunka kaliya 5% dadweynaha waxay ka kooban yihiin Hogaamiyaasha waa weyn iyo kuwa mas'uulka ka ah go'aaminta sida dadweynuhu u dhaqmayo ...
Jawaab Adrian Vale
Ciise LE dijo
Jawaab Ciise LE
hello Francisco Ruiz,
Waan jeclaa qoraalkaaga, waxaan ku siinayaa 10.
Waxaan ka xumahay in dad badani aysan u istaagin inay si taxaddar leh u akhriyaan tabarucaaga iyagoon su'aalo iska weydiin arrimaha ay ka mid yihiin haddii mushahar laga qaaday iyagoo difaacaya dalab.
Anigu waxaan bixiyaa fasalo fasal kasta oo kooxo kala duwan ah waxaan ku siinayaa ogeysiis, hubi rukhsadaha uu codsigu u baahan yahay inuu u shaqeeyo si sax ah kana taxaddar waxa ku jira kumbuyuutarkaaga iyo waxa aad muujiso inta aad ka ag dhow tahay kombuyuutarkaaga. Waa uun digniin, ogaal ahaan in taxaddar la muujiyo lama mid aha jaahilnimada waxa muuqda.
Is farax, shaqo wanaagsan.
Jawaab Deurys Bernardo Zapata
WAAD DHAMAAN SAX TAHAY, MAANTA WHASAPP AYAY WACAYSAY TELEFOONKA MAYA OO AAN KA HELI RAJIGAYGA AMA XAFLAD DIIWAAN AH Wicitaanka QOYSKA MAGACA MAGACA MAGAALADA, TAAS WAA CEEB IYO WACDAR AYAAN QAADAN DOONAA SHARAXA SHARAFTA KU SAABSAN DIIWAANKA DANGERO.
WAAD KU MAHADSAN TAHAY BOGGAADA
Nooca mustaqbalka ee Android wuxuu "jabin karaa" tiro badan oo ah barnaamijyada xididka
Soo dejiso oo rakib Apollo Music Player wixii Android ah